Shily: Fiaraha-miasa vaovao eo amin’ny Global Voices sy ny Mi Voz · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2011 8:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, русский, বাংলা, Français, عربي, Aymara, English
Nanorina fiaraha-miasa vaovao ny Global Voices sy ny Mi Voz – gazety an-tseraseran'olo-tsotra Shiliana – . Hamoaka tantara iray avy ao amin'ny Mi Voz isam-bolana ny Global Voices, mba hahatakatra ny mpamaky iraisampirenena ny feon’ ireo olotsotra mifandray aminy. Mandritra izany kosa ny Mi Voz dia hamoaka lahatsoratra novolavolain'ny Global Voices ka efa nifaneken'ny mpanitsy avy amin'ny fikambanana roa ny votoatiny. Ankoatra izany dia hamoaka lahatsoratra manana lohahevitra malalaka iray ny roa tonta ka mifanaraka amin'ny fepetran'ny Creative Commons izany.
Efa nahazo tsiro kely tamin'ny lahatsoratry ny Mi Voz ihany ny mpamakin'ny Global Voices noho ny lahatsoratra navoakan'i Katie Manning, izay mpanangom-baovao ao amin'ny Mi Voz sady ny olona ifandraisana voalohany nanampy anay tamin'ny fifampiresahana niteraka ity fiaraha-miasa ity. Mbola hanohy ny hizara lahatsoratra avy amin'ny Mi Voz ho amin'ny teny anglisy ao amin'ny Global Voices ihany i Katie.
Amin'ny alalan'ity fiaraha-miasa ity ny Global Voices no hiditra lalina kokoa amin'ny fitateram-baovao Shiliana avy amin'ny fomba fijery ao an-toerana izay mifantoka amin'ny maresaka ivelan'ny renivohitra, Santiago. Manana olom-pirenena mihoatra ny 10 000 tia mampita vaovao mitatitra ho ana fantsom-baovao 18 avy amin'ny faritra 14 manerana ny firenena ny Mi Voz. Nilaza ny Mi Voz, izay niorina tamin'ny 2005, fa hetsehin'ny “tanjona haniteraka ny fampitam-baovao izay hahalalan'ny olona tsaratsara kokoa ny zavamisy ao an-toerana ahafahana mametraka fifampiresahana, handray an-tanana amin'ny lohahevitra mahaliana azy ireo ary hanokatra varavarana vaovao haha-vaiandohandraharaha ny fandaharam-potoana ao an-toerana” izy ireo.
Mi Voz moa dia nilaza ity fiaraha-miasa ity ao amin'ny vohikalany El Paradiario 14 [es].